UFakazi Early ukuba iMisa – 2fish
Home / Church / The amaSakramente / UMthendeleko / UFakazi Early ukuba iMisa
Umbhalo olandelayo ngcaphuno kusukela Apology Okokuqala, elabhalwa Saint Justin le Martyr emhlabeni A.D. 150. A ngivikele ukholo esibhekiswe soMbusi WaseRoma, ichaza indlela yokukhulekela okwenziwa amaKristu okuqala, okuyinto ebalulekile eyaba nsé lanamuhla maKatolika.
65 Kodwa sesizibeke ngaleyo ndlela wageza [okuyi, obhapathiziwe] kuye obelokhu uyaqiniseka futhi esivunywe sifundisa, umlethe indawo lapho labo ababizwa ngokuthi bazalwane ababuthelwa, ukuze singase sithandaze eqotho enibaziyo nobabili sona thina umuntu obhapathiziwe, nabo bonke abanye, kuyo yonke indawo [okuyi, uMthandazo Ivula], ukuthi singase ababalwe njengabakufanelekelayo, manje ukuthi sesifunde iqiniso, Ngemisebenzi yethu futhi kungatholakala izakhamuzi ezinhle futhi abagcini imiyalo, ukuze sisindiswe ngosindiso olulaphakade. Njengoba yaphela imithandazo, sinethulela isigqoko omunye komunye ngokwanga [okuyi, Isibonakaliso Sokuba Ukuthula]. Kukhona-ke alethwe umongameli isinkwa abazalwane nendebe yewayini exutshwe namanzi [okuyi, the Offertory]; futhi uyiphuze, ukunika udumo nenkazimulo kuYise yonke, ngokusebenzisa igama neNdodana, noMoya oNgcwele, futhi inikeza ngiyabonga [okuyi, yokwahlukaniselwa] nobude esiningi nenhlalakahle yethu ababalwe njengabakufanelekelayo ukuthola lezi zinto ngaso izandla zakhe. Futhi lapho iphetha imithandazo nokubonga [okuyi, Greek, eucharistia], bonke abantu ukwethula baveze uvumelana sabo ngokuthi Amen [okuyi, Amen]. Futhi lapho umongameli esebongile, futhi bonke abantu baye bazwakalisa uvumelana zabo, labo ababizwa ngokuthi yithi namadiyakoni nginike yilowo ababekhona ukuba badle isinkwa newayini exutshwe namanzi laliphinyiselwa yokubonga phezu okuyinto [okuyi, iSidlo oNgcwele], futhi kulabo bengekho Zithwala away ingxenye.
66 Futhi lokhu kudla kubizwa ngokuthi phakathi kwethu uKwamukelisa, okungabanga bikho kuso umuntu ovunyelwe ukuba badle kodwa umuntu okholwa ukuthi izinto esibafundisayo kweqiniso, futhi oseneminyaka sihlanzwe ngesigezo okungukuthi, kube ngukuthethelelwa kwezono, naku ukuvuselelwa, futhi ngubani ngakho ophilayo njengoba Kristu uye enjoined. Ngoba isinkwa hhayi njengoba ezivamile futhi isiphuzo esivamile esisithola la; kodwa ngendlela efanayo njengoba uJesu Kristu uMsindisi wethu, kokuba kube yinyama ngeZwi likaNkulunkulu, wayenakho kokubili inyama negazi wokusisindisa, kanjalo esiye wafundisa ukuthi ukudla obongekayo ngemva komthandazo nobuhle beZwi laKhe, futhi kusukela lapho igazi lethu futhi enyameni transmutation inothiswa, kuyinto inyama negazi ukuthi uJesu ngubani waba yinyama. Ukuze abaphostoli, ku Umlando elabhalwa kubo, ababiziweyo amaVangeli, ngaleyo ndlela uwukhululile kithi lokho okwakushiwo enjoined phezu kwabo; ukuthi uJesu wathatha isinkwa, nalapho ibongile, wathi, " 'Yenzani lokhu, njalo uma niyiphuza Bami, lokhu umzimba wami;"Nokuthi, ngemva ngendlela efanayo, ningadli lendebe esebongile, Uthe, "Lokhu kuyigazi lami;"Futhi wabanika sona sodwa. ...
67 Futhi thina kwalokho njalo ukukhumbuza nomunye yalezi zinto. Futhi Abacebile kithi basiza abaswele; futhi sihlale ndawonye; futhi zonke lezi zinto abalungiselela thina ayanikezelwa, siyabusisa Umenzi zonke ngokusebenzisa iNdodana Yakhe uJesu Kristu futhi ngoMoya oNgcwele. Futhi ngosuku olubizwa ngokuthi iSonto, bonke abahlala emizini noma ezweni bahlangane ndawonye endaweni eyodwa, kanye Umlando kwabaphostoli noma emibhalweni yabaprofethi zifundwa, inqobo nje uma isikhathi sivuma [okuyi, the Liturgy of the Word]; ke, lapho umfundi isidlulile, umongameli ngamazwi liyala, futhi anxuse ukuba alingise lezi zinto ezinhle [okuyi, the Homngaleyo ndlela]. Khona-ke sonke avuke ndawonye futhi bathandaze [okuyi, Thandazo we Ethembekile], futhi, njengoba thina phambi wathi, lapho umthandazo yethu iphelile, isinkwa newayini namanzi baletha, kanye nomongameli ngendlela efana inikeza imithandazo nokubonga, ngokwamandla akhe [okuyi, yokwahlukaniselwa], futhi abantu awamukele, ethi Amen [okuyi, Amen]; futhi kukhona zokusabalalisa ngamunye, kanye nokubamba iqhaza kwazo ukuthi phezu okuyinto sibonga Uphiwe, futhi kulabo bengekho ingxenye ethunyelwa namadiyakoni [okuyi, iSidlo oNgcwele]. Futhi Abami kahle ukwenza, futhi uzimisele, ukunikeza lokho acabanga ngamunye ukulingana; futhi lokho eqoqwe imali nomongameli, ngubani succours izintandane nabafelokazi kanye nalabo, ngokusebenzisa ukugula nanoma iyiphi enye imbangela, kukhona oswele, futhi labo abasezibophweni nabafokazi owayegogobele phakathi kwethu, futhi igama enakekela zonke abadinga [okuyi, Collection]. Kodwa ngeSonto usuku lapho sonke umhlangano wethu ezivamile, ngoba ngosuku lokuqala lapho Nkulunkulu, kokuba usebenzile ushintsho usebumnyameni futhi ndaba, owenza umhlaba; futhi uJesu Kristu uMsindisi wethu ngosuku olufanayo wavuka kwabafileyo. Ngokuba noma wabethelwa esiphambanweni ngosuku ngaphambili kwalolo Saturn [okuyi, ngoMgqibelo]; futhi ngosuku ngemva kwalokho we-Saturn, okuyinto usuku Sun, njengoba ayeke wavela kubaphostoli baKhe abafundi futhi, Wabafundisela lezi zinto, okuyinto esisifakile kuwe futhi, ukuthi.